Amaala St. Kitts na Nevis Passport nke St. Kitts na Nevis
Hipmụ amaala nke St. Kitts na Nevis - Ezinaụlọ Akwukwo Sustainable (SGF)
Nwa amaala nke St. Kitts na Nevis - investmentlọ na - akwụ ụgwọ ụlọ, ezinụlọ
Amaala nke St. Kitts na Nevis - itinye ego na ala na ụlọ, na-arịọghị maka otu
Amaala St. Kitts na Nevis • Họrọ ọrụ
Nkwụnye ego maka St. Kitts na nwa amaala Nevis
Uru nke Saint Kitts na ụmụ amaala Nevis
A na-ewere St Kitts na Nevis Citizenship site na Mmemme itinye ego ka otu n'ime ndị a kacha mara amara. Paspọtụ nke steeti a ga-abụ ezigbo nhọrọ maka ndị chọrọ ịnweta ohere ịga leta ihe karịrị mba 150 na-enweghị visa (gụnyere nke EU na UK), yana ịkwalite ịtụ ụtụ. Otu n'ime uru ndị ọzọ nke mmemme a na-etinye na ntinye ego nke Saint Kitts bụ oge nhazi ngwa ngwa, enweghị ọnọdụ obibi na mba ahụ yana nkwa nke nzuzo.
Kedu ihe ndị a chọrọ maka ndị na-achụ ego?
Nkwado Afọ (18 +)
Ohere iji gosipụta eziokwu nke nnata nke ego
Ga nke ọma site na ịdị uchu
Mụ na onye na-etinye ego, ọ ga-ekwe omume ịnye paspọtụ maka ụmụaka (afọ ha agaghị agafe 30 afọ), nwunye, ụmụnne nwoke na ụmụnne nwanyị (n'okpuru 30 afọ), nne na nna (karịa 55 afọ) N'otu oge ahụ, edemede ndị edepụtara (gụnyere ụmụaka karịa 18 afọ) ga-adabere n'ụzọ ego na-adabere na ndị na-etinye ego.
Ego anaghị akwụghachi. Obere ego iji nweta paspọtụ Saint Kitts site na iji usoro a bụ dollar 150 puku US. Ọ bụrụ na ụmụ amaala kwesịrị inweta ọ bụghị naanị site n'aka ndị na-etinye ego n'onwe ya, kamakwa karịa ndị dabere 3, achọrọ ịkwụ ụgwọ ọzọ maka 10 puku US dollar.
Zụta ala. Nhọrọ a maka inweta paspọtụ maka Saint Kitts na Nevis gụnyere ịzụta ala na ego nke $ 400 puku US, dabere na ịnwe ihe ndị enwetara maka oge opekata mpe afọ 5. Enwekwara ike itinye ego 200 puku dollar US, mana na nke a ọ ga-ekwe omume ire ihe ahụ naanị mgbe afọ 7 gachara. Ndepụta ihe ndị dị maka ịzụta n'okpuru mmemme ụmụ amaala itinye ego gọọmentị kwadoro ya.